Maxaa ku soo kordhacay xaalada Siyaasada Dalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxaa ku soo kordhacay xaalada Siyaasada Dalka
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa wada wali qorshihii ahaa “WAR-WAR KUDIL” Qorshahan ayaa ah in marka dhagaha Villa Soomaaliya ay ku dhacaan warar aanay jecleysan, ay isla markiiba soo saaraan warkaas mid ka soo horjeeda si loo qaldo ra’il caamka bulshada.
Hadaba qorshahan waxaa ugu danbeeyay markii ay sheegeen midawga musharixiinta iyo Rw Rooble inay ku hesheeyeen qabashada mudaaharaad ka dhan ah madaxtooyada, isla markiiba Villa soomaaliya waxay soo tuurtay warkii laga sugayay ee ahaa inay ku disho warka socda.
Tan iyo markii uu dhamaaday mudo xileedka Farmaajo waxaan qabsoomin Sadex Shir oo uu ku baaqay inay isugu yimaadaan Dawlada iyo Maamul goboleedyada, iyadoo mid walba lagu beegayay in looga hortago warar aanay jelaysan villa soomaaliya oo xiligaas socday.
Hadaba inyar aanu ka eegno sida ay arimahan usocdaan.
Shirka berri 4 March uu Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Farmaajo ku dhawaaqay haddii uu qabsoomi waayo waxaa uu noqonayaa markii saddexaad oo muddo bil gudahood ku dhici waayo Shir uu Farmaajo isugu yeeray Dawlada iyo Dawlad goboleedyada oo aanay Puntland iyo Jubbaland ka soo qeyb gelin tan iyo markii muddo xileedkiisa uu dhammaaday 8 February.
Farmaajo ayaa horay u iclaamiyay 15 bishii hore ee Febraayo shir ka Garowe, kaddib markii uu fashilmay shirkii Dhuusamareeb, Puntland ayaa ku gacan seyrtay inuu shirkaas ka dhaco Garowe, taas bedelkeed waxay soo jeedisay inuu ka dhaco Muqdisho.
Sidoo kale Farmaajo ayaa soo saaray war saxaafadeed uu shir isugu yeeray dowlad goboleedyada 18-19 Febraayo shir ka dhici lahaa Muqdisho, inkastoo xilligaas Muqdisho ka jireen xiisado siyaasadeed iyo bannaan baxyo ay iclaamiyeen Mucaaradka, ku dhawaaqida shirkaas ayaa loo arkayay inuu uga gol lahaa si uu bannaan baxa Musharxiinta meesha uga saaro, balse wax aan la fileyn ayaa dhacay oo ahaa dhacdadii habeenkii 19 Febraayo ee lagu weeraray Hotelkii ay degenaayeen Madaxweynayaashii hore iyo subixii jimcaha oo lagu rasaaseeyay dibad baxii ay horboodayeen midawga Musharaxiinta.
Si kastaba ha ahaatee haddii markii saddexaad shirku qabsoomi waayo waxaa calaamad su’aal noqon doona in go’aamada Madaxweynaha aanu dhaqan geli doonin, taasoo ay u badan tahay in markaan qaadan doonaan oo awoodda ay la wareegaan Xafiiska Qaramada Midoobey si ay iyagu isugu keenaan dhinacyada.
Puntland, Jubaland, iyo midawga musharixiinta waxay mar kasta ku cel-celiyaan in Farmaajo aanu isugu yeeri karin shir dhinacyada maadaama aanu sharciga aanu u ogolaanaynin.
Hadaba markii sadexaad ayuu umuuqdaa inuu fashilmayo baaqa farmaajo ee ah isu imaatinka shir muqdisho ka dhaca barito 4ta bisha.
Dawlad goboleedyada ka soo horjeeda Farmaajo iyo musharixiinta mucaaradka ayaa kudhiirigelinaaya Rooble inuu qaato kaalinta isu yeerida dhinacyada iyo hergelinta doorasho xalaal ah, balse waxaa is waydiin leh sida uu uga badbaadi karo Farmaajo oo wax walba usamayn doona inuu kursiga ku soo laabto.
Previous articleXiddigga Bollywood, Salman Khan oo Filim cusub la jilayo Shahrukh Khan ee Pathan
Next articleKulan Sagootin ah oo B/weyne loogu sameeyay Wasiirka wasaarada arimaha gudaha Jen, Mukhtara Xuseen Afrax
Human Rights Watch oo ku tilmaantay dagaalkii Qaza in...
Gantaalkii weynaa ee Shiinaha faraha ka baxay oo la filayaa...
Lafta-gareen Axmed Madoobe, Deni Guudlaawe oo lagu wado in ay maanta...